Hay’adda ISO oo siminaar u qabatay Maamulka, Macallimiinta iyo Dhammaan Shaqaalaha Jaamacadda Simad | Somali Information Center
« Ra’iisul wasaaraha dalka oo hambalyo diiran u diray ciidammada Xoogga dalka..
Xisbiga TAYO oo farac ka furtay dalka Holland (SAWIRRO) »
Hay’adda ISO oo siminaar u qabatay Maamulka, Macallimiinta iyo Dhammaan Shaqaalaha Jaamacadda Simad April 12, 2012 Khamiis:(SIC)-Xarunta taqsuusaadka sare ee jaamacadda SIMAD ayaa shalay lagu soo gabagabeeyay siminnaar socday muddo shan maalmood ah oo loo qabtay maamulka, macallimiinta iyo dhammaan shaqaalaha jaamacadda SIMAD.
Ujeeddada siminnaarka ayaa ahayd sidii jaamacadda SIMAD ay u qaadan lahayd shahaadada ay bixiso hay’ada International Organization Standardization (ISO) oo ah hay’ad caalami ah, iyadoo simnnaarka lagu baranayay nidaamka tayo ee ay dejisay haya’dda ISO .
Ugu horreyn, waxaa xafladda xirtaanka siminnaarka ka hadlay guddoomiye xigeenka jaamacada SIMAD, C/raxmaan Anas isagoo ka sheekeeyay faa’iida siminnaarka uu u leeyahay jaamacadda, isagoona tilmaamay in barnaaminkan uu qayb ka qaadan doono istaraatijiyadda jaamacadda SIMAD ee shanta sano ee soo socota oo la filayo in ardayda jaamacadda ay gaaraan 20,000 halka maanta ay ku dhow yihiin 4,000.
Guddoomiyaha jaamacadda SIMAD, C/raxmaan Maxamed Xuseen (Odowaa) oo soo xiray xafladda siminnaarka lagu soo gabagabeynayay ayaa u mahadceliyay macalimiin ajaanib ah oo bixinaysay tababarka iyo dhammaan maamulka, macalimiinta iyo shaqaalaha jamaacadda.
“Dadka u baahan waa innaga, dadka taariikhda reebaya oo la xasuusan doono waa innaga, dadka laga rabo inay sameeyaan waxaasna waa innag,” ayuu C/raxmaan ku yiri hadalkiisa isagoo la dardaarmayay ka qayb-galayaasha siminnaarka.
Sidoo kale, guddoomiyaha jaamacadda ayaa ugu baaqay shaqaalaha iyo maamulka Jamaacada in laga shaqeeyo sidii loo baahi tiri lahaa shacabka Soomaaliyeed isla mrakaana kor loogu qaadi lahaa aqoontooda.
Hay’adda International Organization Standardization oo marka magaceeda lasoo gaabiyo la yiraahdo ISO ayaa ah hay’ada ka shaqeysa ilaalinta tayada jaamacadaha dunida, iyadoo jaamacadda SIMAD ay rajeynayso inay noqoto jaamacaddii ugu horreysay oo hesha shahaada ay bixiso hay’addan.
Maamulka jaamacadda SIMAD ayaa dhawaan Muqdisho ka furay xarunta takhasusi sare ah taasoo meesha ka saartay baahi ah in ardaydu ay waxbarasho takhasusi ah u doontaan dalka dibaddiisa.
Waxaana xusid mudan in dhawaan jamaacaddu ay ku biirtay ururka jamaacadaha Afrika, isla markaana heshiisyo dhanka waxbarashada ah ay la gashay hay’ado ka shaqeeya waxbarashada oo ku yaalla dalal ay ka mid yihiin: Kenya, Malaysia, Uganda iyo kuwa kale.